Wararka Maanta: Isniin, Aug 30, 2021-Guddiga doorashada Puntland oo diiday in dib loo dhigo doorashooyinka soo socda ee Puntland
Guddoomiyaha gudidga doorashooyinka Guuleed Saalax Barre, oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Garowe ayaa ka dhawaajiyay in aanu waxba iska beddelidoonin jadwalka doorashada islamarkaana aysan aqbalidoonin wax dib u dhac ah oo doorashada ku yimaada.
Guddoomiye Guuleed ayaa sheegay in ay ururradu u sheegeen in aanu jirin daruufo xilligan keeni kara in dib loo dhigo doorashada, wuxuuna caddeeyay ururkii aan doorashada diyaar u ahayn in aysan ku qasbayn.
Dhinaca kale, ururrada siyaasada ayaa ku gacan sayray go’aanka guddiga doorashada, waxaana lagu wadaa in ay soo saaraan mowqifka ay ka qaateen arrimaha doorashooyinka iyo cabashooyinka ay qabaan.
Ururrada siyaasada Puntland ayaa ka cabanaya dhaqaale xumo iyo saameynta doorashada federalku ku yeelan karto tan Puntland.
Doorashooyinka dowladdaha hoose ee Puntland ayaa la qabanayaa bisha tobnaad dhamaadkeeda ee sannadkan, waana doorashooyin tijaabo oo lagu bilaabi doono nidaamka xisbiyada badan ee Puntalnd.